Bhuku rePakarati Boeing_B737-823_Advanced_VC_FSX _ & _ P3D
mubvunzo Bhuku rePakarati Boeing_B737-823_Advanced_VC_FSX _ & _ P3D
1 gore 7 ago #698 by Goodjohn80
Hello munhu wose!
Ingoona nzvimbo iyi yakawanda uye yakadzingwa purogiramu yakataurwa pamusoro apa asi hapana bhuku rinowanikwa. Pfungwa ipi zvandinogona kuwana bhuku?
1 gore 7 ago #699 by FlankerAtRicoo
Ndanga ndaenda kuGoogle OpenSky (mufambiro wendiza), Alejandro Rojas Lucenda (VC model), zvimwe Honeywell FMC
Iyo inoda chikwata chekutanga chekufamba-famba.
Maitiro edzifambi haazovi kure neFSX asingatarisiri B737_800 ....
PS: Ichokwadi kuti nzvimbo yakanaka uye yakanyanya nyore kufamba nayo seyakagadzirira.
Time chokusika peji: 0.191 mumasekonzi